Gaaffiin Baratootaa, Gaaffii Uummata Oromooti! – YEROOBLOG
Gaaffiin Baratootaa, Gaaffii Uummata Oromooti!
Yerooblog	Oromia &Ethiopia, Oromo Protests, Politics	 December 1, 2015 December 25, 2015 1 Minute
Barattoonni Oromoo sadarkaa tokkoffaatii haga yunvarsiitiitti jiran Maastar Pilaanii Finfinnee mormuudhaan Oromiyaa bakka gara garaa keessatti hiriira nagaa baha jiru.
Hiriira mormii kanarratti barattoonni reebaman, hidhaman akkasumas ajjeefaman akka jiran gabaafamaa jira. Yeroo barattoonni Oromoo mirga saba isaanii kabachiisuuf karaatti bahan, uummaanni balaa’aan callisee taa’ee ilaaluu hinqabu. Qotee bulaan, barsiisaan, hojjetoonni mootummaa, daldalaan, paartileen mormitootaa baratoota bira dhaabbachuun ni barbaachisa.
Barattoonni Oromoo waggaa waggaatti gaaffi uummata Oromoo deebii argachuu hindandeenye qabatnii mormi nikaasu, achi ni reebamu, ni hidhamu, ni ajjeefamu akkasumas barumsa isaaniirraa ni ariyatamu. Mormii barattootaan qofa gaaffiin uummata Oromoo deebii hinargatu. Kan ta’uu qabu, Oromoon hundi gurmaa’ee kaayyoo tokkoon mirgasaa kabajisachuuf ka’uu qaba.
Yeroo barattoonni Oromoo harka duwaa, loltoota mootummaa meesha waraanaa hidhataniin waliin walaa’aansoo walqaban taa’ani ilaaluun gaaffiin barattootaa gaafii keenya miti jechuu fakkaata. Mootummaan kunis kan nutuffate kanaafi…osoo uummaanni Oromoo hundi bakka jirutti mootummaa kanaan falmee, silaa yoona kana abbaa mirgaas abbaa biyyaas taanee turre. ‪#Oromoprotests
Published December 1, 2015 December 25, 2015
Previous Post BBC Approves Afan Oromo as one of the Languages Used to Broadcast to Ethiopia
Next Post Killing Oromo students Should Stop!